Kungani ibhethri ngokushesha lihlala phezu Android? Izizathu kanye nezincomo
On amafoni android nezinkinga ibhethri - into ngempela njalo. Ngempela, ngezinye izikhathi kuba nzima kakhulu ukusungula isizathu sangempela esenza smartphone kukhishelwa ngokushesha kangaka. Empeleni, manje, lokhu akuyona inkinga njengoba acute njengakuqala. Ikakhulukazi, isizathu salokhu iba into ukuthi abakhiqizi idivayisi yayo iwuhlelo usungula ibhethri enamandla. Nokho, akubona kuphela sebengakwazi kuvuse osenyameni okusheshayo. Ngakho, iziphi sezizathu ezinkulu zokuthi kungani ibhethri uhlezi ngokushesha Android?
eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa Technical.
Lawa sezizathu ezinkulu zokuthi kungani ibhethri Android eshesha ihlala. Asithathe ngasinye salezi zici ngokuningiliziwe.
Lokhu isigaba amadili abakhiqizi kwihendisethi, ubani engafuni ukusebenza isikhathi kanzima ngokwanele ukusebenza kumadivayisi abo. Lokhu kwenzelwe nje inkinga software, okuyinto kuhlobene nokuba nezinduna firmware. Kodwa kukhona ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama:
Abakhiqizi ngokuvamile eyodwa futhi isofthiwe efanayo wagqoka onobuhle ezahlukene.
Ezingeni hlelo kakhulu kabi lwenteke ukulawula kwenkokhelo.
Ayikho lithathelwe likwazi ukuhlalisa inani elandayo milliamps.
Lawa izakhi eziyisisekelo nokwenza okubi, okuyinto abe nomthelela omubi impilo yebhethri. Abakhiqizi kumele ucabange kahle, kungani Android ngokushesha ihlala ibhethri, bese sithatha izinyathelo ezifanele.
Uma manje unayo iselula ezinamandla, okuyinto has processor isikwele-core, ezintathu gigabytes RAM, eliphezulu ukubonisa futhi isikhulumi enamandla, akukho isimanga yokuthi kudle amandla. Uma ungeze ku nokwenza abampofu, ibhethri kungenziwa akhishwe siyibhekile. Yini okufanele banake ohlangothini lwezobuchwepheshe, uma kuziwa ukuthi, kungani Android ngokushesha ihlala ibhethri?
Processor. Kufeza indima ukukala amandlajubane kanye nenani cores. On amafoni android ungafaki coprocessors, okunikeza enkulu nakakhulu energy imali. It Ubuye nomthelela omubi impilo yebhethri.
Khombisa. Lena esinye isizathu esenza kungabi kuyashesha kakhulu ibhethri uhlezi esihlalweni Android. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngokuphathelene ekhombisa eliqhakazile okucace kakhulu a diagonal.
Inombolo-SIM khadi. amafoni eminingi yanamuhla kule yesistimu yokusebenza ukuba namakhadi amabili-SIM. Uma basebenza parallel, libuye libe nomthelela ongemuhle impilo yebhethri. Lena iphuzu elibaluleke kakhulu, okuyinto uyachaza ukuthi kungani ibhethri Android ifoni ihlala ngokushesha.
Yilokho lobuchwepheshe ingxenye isitshalo kungaba ibhethri. Njengoba ungacabanga, lokhu akukhona konke. Kodwa lezi, lawo ngamaphuzu ayinhloko. Zilungiselele ngokushesha deplete efonini yakho, uma uthenga imodeli iwuhlelo.
Libuye ngempela nesizathu esizwakalayo. Futhi kuyaphuthuma kakhulu amafoni android. Iqiniso lokuthi uhlelo yakhelwe ukuze izicelo njalo sisebenzela ngaphakathi kuwo. Ngisho nalezo isivaliwe. Lolu hlelo ibusa kakhulu ibhethri. Yingakho ibhethri ngokushesha ihlala phansi Android. Samsung - lokhu ungomunye walabo izinkampani ukuthi ngenkuthalo wagxeka ikakhulukazi ke. Empeleni, hhayi nje. Kodwa uma kahle usebenzise ifoni yakho, amathuba ukubeka kube sekupheleni kosuku uyowa kakhulu. Futhi yini okufanele uyenze?
Vala imisebenzi engenawaya navigation.
Wehlisa ukukhanya esiphansi, noma okungenani vula auto.
Ilokhu ukuqedela evulekile ngemuva zohlelo.
Vala internet neselula.
Vala izibuyekezo othomathikhi.
Uma ulandela lezi amathiphu, nawe ngeke umbuzo othi, "Kungani ithebhulethi ngokushesha ihlala Android ibhethri." Ifoni futhi ukhathazekile, kanye kunoma iyiphi enye idivayisi ukuthi iyasebenza kule yesistimu yokusebenza.
Yiqiniso, isizathu ukudedelwa okusheshayo ifoni kungaba futhi ukuhluleka kwawo. Kunoma ikuphi asikwazi indiva. Yini engenzeka nedivaysi izinkinga ezivela uma uyisebenzisa?
Kwehliswe umthamo webhethri.
Unezinkinga isilawuli kwenkokhelo.
Inkinga kwenzeka uma ifoni ishaja.
Lawa sezizathu ezinkulu zokuthi kungani ucingo amasethi. Basitshela ukuthi labo bantu ukuba nesikhathi popolzovavshis kudivayisi yakho. Phela, lezi zinkinga kwenzeke kaningi ngokuhamba kwesikhathi. Nokho, umshado engakaze kukhanselwe.
Lena enye lalivamile phakathi abasebenzisi Android ne uxazulula imbangela amafoni abo. Uma into akwenzekanga firmware, ifoni kungabuye phansi. Lokhu kunjalo, ikakhulu kubalandeli ukufaka kweqiniso ngokwezifiso firmware (eqoqwe ngabasebenzisi). Kufanele uqaphele kakhulu nabo. Akukhona lokho kuphela, bakwazi ukubeka yebhethri, ngakho ngaphezulu kanye iwaranti izimpukane.
Imiphi imiphumela esingayilindela uma zibekwe ngokufingqiwe ngani kulesi sihloko? Udinga yibhekisise izici ezifana yocingo:
Ukusebenza (CPU, RAM).
Yizo ezinquma impilo yebhethri. Njengoba for ohlangothini sesofthiwe, kufanele sinake:
Inguqulo ka-Android. Ayanda kuba - isikhathi eside ocingweni azosebenza.
Ukuba khona esibonakalayo-add-on kusuka umkhiqizi. "Naked" Android njalo ibhetri esingaphansi interface kusukela abakhiqizi.
Uma silalela lezi amaphuzu uma uthenga i-smartphone Android, kuyilapho ukuphila kwebhetri sayo kuyoba okuningi. Ungakwazi ukuhlala eside uxhumene nabantu obathandayo nina bantu.
Yini okumele uyenze uma ungenawo ukusebenzisa Exe-amafayela?
Ukufometha flash ngemoto ukuze NTFS. Iseluleko esiwusizo kubasebenzisi Windows XP
"Ezigcwalisekile Murder": nabalingisi, ngesakhiwo, ukuqokwa